Ama-ABC Amasha Wokuthengisa: Njalo Xhuma | Martech Zone
Ama-ABC Amasha Wokuthengisa: Hlala Uxhuma Njalo
NgoMsombuluko, Juni 6, 2016 Douglas Karr
Izitolo ezithengisa izitini nodaka zisaqhuba amandla amaningi okuthenga ezitolo zazo - futhi ngeke zisuke noma kunini. Kepha isimilo siyashintsha, sidinga isu lokuthengisa langaphakathi ezitolo ukwakha ubudlelwano obungcono nokuhlangenwe nakho namakhasimende abo ukuqinisekisa ukuthi bayaqhubeka bebuya.
Le infographic evela ku-DirectBuy ukubukeka okusobala kwezinselelo zabo, ukuthi ukuziphatha kwamakhasimende kushintsha kanjani, namasu amasha abawasebenzisayo. Mhlawumbe engikuthanda kakhulu yi-ABC yabo entsha… akuyona Njalo Vala, kunjalo Njalo Xhuma!
Amaqhinga okuthengisa abalulekile awela eceleni kwendlela evuna ukuxhumana okusebenziseka kalula, okuqondiswe kusevisi. Sitshala imali kuhlu lwezinzuzo ezibonakalayo ukuze amalungu athole amanani nezinsizakalo ezingcono kakhulu ngaphandle kokushiya ikhaya. I-DirectBuy
Ukuthenga online akuhlinzeki nje ngokulula, kunikeza ithani lezinye izinzuzo:
Amahora Wokugcina - Abathengi bangathenga noma nini lapho befuna uku-inthanethi.
Amanani okuncintisana - Umncintiswano onqamula i-Intanethi wehlisa amanani entengo phakathi kwabancintisana nabo.
Speed - Akukho ukulinda emigqeni… ukuthenga nge-inthanethi kushesha kakhulu.
Izipho - Ukutholakala, ukuhlukahluka nokuqhathanisa konke kuphakeme ku-inthanethi.
Abantu basathenga esitolo ngezizathu eziningi… ukubona nokuthinta umkhiqizo, ukunethezeka kwesitolo, ukwazisa abasebenzi, nokuthi bangakwazi ukubuyisa izinto kalula. Ukuqondanisa ukusebenziseka kalula kwe-inthanethi nesipiliyoni esihle esitolo kuthuthukisa ikhono labathengisi lokuthola ithrafikhi eningi esitolo ngenkathi ushayela ukuguqulwa ku-inthanethi futhi.
Awukwazi nje ukufanisa isipiliyoni samakhasimende engxoxweni noma ocingweni nethuba lomuntu siqu. Ukwakha ubudlelwano kufanele kube yinto ephambili kuzo zonke izitini nodaka.
Tags: njalo uxhumaeqondeukuhola isizukulwaneukuthengwa kwamaselulaukuthengwa kwe-inthanethitekutsengisaisipiliyoni sokuthengaisipiliyoni sesitolo
Jul 12, 2016 ngo-10: 57 PM
Siyabonga ngolwazi. Ekusebenzeni kwami ​​ngishilo, leyo mpendulo enhle noma ikhasi elihle ku-facebook, lingadudula abantu ukuthi bathenge i-smth. Kepha umqondo omubi kakhulu ukunaka i-SMM futhi i-ecommerce ayinandaba ne-SEO.